Madaxweyne xasan oo ku gooddiyey in ay cirib-tiri doonaan ajaaniibta ku jira kooxda Al-shabaab – Radio Daljir
Madaxweyne xasan oo ku gooddiyey in ay cirib-tiri doonaan ajaaniibta ku jira kooxda Al-shabaab
Nofeembar 21, 2013 12:00 b 0
Muqdisho, November 21, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay qorshaha dowladda federaalka ee ka dhanka ah kooxda Al-shabaab, waxaa uu sheegay in dowladdiisa ay talaabo culus ka qaadayso kooxda.
Madaxweyne xasan sheikh waxaa uu ku celceliyey in dowladiisa ay ciribtiri doonto ajaaniibta Argagixisada ah ee jooga Soomaaliya, kuwaas oo abbaabulaya weerarada ka dhanka ah shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed.
?Amni darada iyo qaraxyada ka jira dalka waxaa abbaabulaya rag Argagixiso ah oo isugu jira Ajinebi iyo Soomaali, waana ciribtiri doonaa si aysan dadka u dhibaatayn.? Ayuu yiri Xasan sheikh oo dadka iyo dowladda Jabuuti markale uga tacsiyeeyey khasaaraha weerarkii Saalasadii ee Beledweyne.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan mar uu ka hadlay weerarada Argagixisada ee dalka ka dhaca iyo dagaalka kooxda Al-shabaab, waxaa uu xilligaas baaq u jeediyey ajaaniibta ku jira ururka oo uu ka dalbaday in ay dalka isaga baxaan.
?Dowladda iyo shacabka ma niyad jebin doono fulay cararaya intii ficil qarax ah uu sameeyo ama ismiidaamiyo, dadka Soomaaliyeed baa ka xoog badan, ka diin badan, kanaba dadnimo badan.? Ayuu mar kale yiri Xasan sheikh oo ka hadlay weerarada Argagixisada.
27 ruux ayaa ku dhintay weerarkii ismiidaaminta iyo rasaasta isugu jiray ee lagu qaaday saldhiga dhexe ee degmada Beledweyne, halkaas oo dadka ku dhintay ay u badan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa AMISOM weliba jabuuti iyo kooxdii weerarka soo qaaday oo iyana wax laga dilay.
Prof. Jawaari ?Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay si dhab ah uga faa?iidaysato maal-gashiga?
Puntland oo maclumaad laga qoray Al-shabaab ka heshay rag u xiran oo u dhashay Britian iyo France